အခြေခံပညာ ကျောင်းများ၏ အတန်းတင် စာမေးပွဲရက်နှင့် ချင်းအမျိုးသားနေ့ တိုက်ဆိုင်နေသောကြောင်? - Yangon Media Group
ဟားခါး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁
ချင်းပြည်နယ်၏ အထွတ်အမြတ်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်သော ချင်းအမျိုးသားနေ့တွင် ချင်းတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် ယင်းရက်နှင့်တိုက်ဆိုင်နေ သော အတန်းတင်စာမေးပွဲရက်များကို ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ရက်ပြောင်းရွှေ့ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးထံမှ သိရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ ရက်တွင် ကျ ရောက်သည့် ချင်းအမျိုးသားနေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက်ပိုင်း အနှစ် ၇ဝ ဝန်းကျင်နှစ်စဉ်ကျင်းပလာခဲ့ရာတွင် ယခင်နှစ်များက အခြေခံမူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းများ၏ အတန်းတင်စာမေးပွဲနှင့်တိုက်ဆိုင် မှုမရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် စတုတ္ထတန်း နှင့် အဋ္ဌမတန်းစာမေးပွဲရက်များနှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည့်အတွက် ရက်ပြောင်းလွှဲကျင်းပရန် စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
”မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ စာမေးပွဲကျင်းပတဲ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန် တော်တို့ပြည်နယ်မှာ ကကျွန်တော်တို့ ချင်းတိုင်းရင်းသားအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အထွတ်အမြတ်ရက်ပွဲတော်နဲ့ ထူးခြားစွာတိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း သီးသန့်ရက်ရွှေ့ကျင်းပပေးတာ မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရက်အကြာကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတွေအတွက် ပြန်ကြည့်ရတယ်။ သူတို့စိတ်လေသွားနိုင်တယ် လေ” ဟုချင်းပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးပေါင် လွန်းမင့်ထန်က ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
ချင်းအမျိုးသားနေ့ကို ယနေ့အထိ ချင်းပြည်နယ်မြို့ကြီးများနှင့် ချင်းတိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မြို့ရွာများတွင် ချင်းအမျိုးသားနေ့ဟူ၍ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများဖြင့် ကျင်းပလေ့ရှိကြပြီး ယခုနှစ်ချင်းအမျိုးသားနေ့ကို ချင်းပြည် နယ်မြို့တော် ဟားခါးမြို့တွင်ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဆုဖလား လမ်းကြောင်းပေါ် စပါးအသင်းပြန်လာပြီဟု ဆွန်ဟောင်မင် ကြုံးဝါး
ကန့်ဘလူမြို့နယ်ရှိ လင်းနို့ဂူတွင် လင်းနို့အကောင်ရေ တစ်သန်းကျော် ကျက်စားကြောင်း WCS မှတ်တမ်??
နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်း အိမ်သာတွင်းတူးရာမှ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းများ တွေ့ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် ကုန်တင်ကားနှင့် လူစီးကား တစ်စီး ရင်ဆိုင်တိုက်မိ၊ ၁၈ ဦးသေဆုံး??
အောက်တိုဘာ လကုန်အထိ ဟိုတယ် အလုံးရေ တစ်ထောင်ကျော်နှင့် အခန်းပေါင်းခြောက်သောင်းကျော် လုပ်ငန